Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || सम्पादकीय : सीसीटीभी अद्यावधिक गर – kayakairan.com
८ भाद्र २०७६, आईतवार ०३:३०
कतिपय होटलमा क्यामेरा भएपनि बिग्रिएका छन् । केही होटलका क्यामराले भिडियो खिच्छन् । तर, रेकर्ड स्टोर हुँदैनन् । क्यामेरा जडान गर्नका लागि करिब दुई वर्षअघिबाट चितवन होटल व्यवसायी संघले सक्रियता देखाएपनि धेरै पुराना होटल तथा लजहरुमा अझै जडान भएका छैनन् ।
सीसीटीभी क्यामेराले आफ्नो क्षेत्रमा भएका सबै दृश्य खिच्छ । पछिल्लो समय विभिन्न अपराध तथा अपराधिक गतिविधि रोक्नका लागि भरपर्दो प्रमाणका रुपमा सीसीटीभी फूटेजलाई लिने गरिएको छ । हो पनि । त्यसले सबैथोक देखाउँछ । यदि क्यामेराको कभरेज क्षेत्रमा केही गतिविधि भएको छ भने त्यसले देखाउँछ । त्यो देखिनका लागि कम्प्युटरमा यसलाई सेभ गरिएको हुनुपर्छ ।
अपराधका लागि होटललाई प्रयोग गरिएको हुन सक्छ । किनकि होटल सार्वजनिक क्षेत्र हो । यहाँ जोसुकै गएर बस्न पनि सक्छ । होटलमा कसैलाई गएर बस्न निषेध गर्न सकिन्न । बस्न दिनै पर्छ । कसैको कोठामा के हुँदैछ भन्ने हरदम निगरानी गरिरहन पनि सकिन्न । किनकि कोठभित्र गरिने गतिविधि गोप्य हुन्छ । कसैको गोप्यता भंग गर्ने अधिकार कसैलाई छैन पनि । तर, कोठभित्रको गतिविधि सबै निगरानीमा राख्न नसकिएपनि कोठाको ढोकासम्मको गतिविधि निगरानी गर्न भने सकिन्छ ।
अहिलेको सवाल नै यही हो । पछिल्लोपटक नारायणगढको एक होटलमा काठमाडौंबाट आएका एक व्यक्ति झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएपछि हरेक होटलमा सीसीटीभी छ कि छैन ? भए कुन अवस्थामा छ ? काम गर्ने अवस्थाका सीसीटीभी छन् कि छैनन् ? आदि सवाल आएका छन् । सम्बन्धित होटलमा सीसीटीभी भएको तर घटना भएको बेलामा काम गर्ने अवस्थामा नभएको अवस्थाले झनै अनेक आशंका जन्माइदिए । त्यसैले पनि सीसीटीभी हरसमय चल्ने अवस्थामा राख्नुपर्ने रहेछ ।
विडम्बना चितवनका मध्यम तथा निम्नस्तरका प्रायः होटल तथा लजहरुमा सीसीटीभी क्यामेरै छैन । कतिपय होटलमा क्यामेरा भएपनि बिग्रिएका छन् । केही होटलका क्यामराले भिडियो खिच्छन् । तर, रेकर्ड स्टोर हुँदैनन् । नारायणगढको एक होटलमा २०७३ असार २६ गते एक महिला मृत भेटिएपछि चितवनमा प्रहरीले होटल, लज तथा रेष्टुरेन्टहरुमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने विषयमा चासो देखाएको थियो । क्यामेरा जडान गर्नका लागि करिब दुई वर्षअघिबाट चितवन होटल व्यवसायी संघले सक्रियता देखाएपनि धेरै पुराना होटल तथा लजहरुमा अझै जडान भएका छैनन् ।
क्यामेरा भएपनि नियमित जाँचमा ध्यान नदिँदा भिडियो रेकर्ड हुने तर रेकर्ड स्टोर नहुने समस्या देखिने गरेको छ । होटल, लज, रेष्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ तथा बारहरुमा क्यामेरा अनिवार्य राख्न संघले निर्देशन दिएको पनि बताउँछ । तर, होटलवाला यसमा गम्भीर छैननर । उनीहरुले क्यामेरा राखे पनि त्यसलाई बेलाबेलामा गर्नुपर्ने मर्मत र अद्यावधिक गरिरहेका छैनन् । यसले कालान्तरमा समस्या पर्ने होटलवालालाई नै हो । घटना भएपछि होटलवाला नै पहिले मुछिने हो । अरु प्रमाण फेला नपरुञ्जेल होटलवालाले नै दुःख पाउने पक्का हुन्छ । त्यसैले भएको जे हो छर्लङ्ग देखाइदिनका लागि सीसीटीभी राखौं । राखिएका सीसीटीभी बेला–बेलामा परीक्षण गरौं ।